सम्धिनीको भिडियो हेरे पछि सविताको आमाले यसो भनिन, आमा संगै रोईन मञ्जु खाँड… – Sandesh Press
सम्धिनीको भिडियो हेरे पछि सविताको आमाले यसो भनिन, आमा संगै रोईन मञ्जु खाँड…
June 10, 2021 345
सम्धिनीको भिडियो हेरे पछि सविताको आमाले यसो भनिन, आमा संगै रोईन मञ्जु खाँड…चितवन । आफ्नै ससुरा ले बुहारी को गो प्य अ ङ्ग मा छु ने जस्ता नराम्रा हर्कत गरेका भिडियोहरु एकाएक मिडियामा आइरहेका छन् । परिवारभित्रै असुरक्षित बनेका छन् नेपालमा महिलाहरु भन्दै धेरैले यस घटनाको वि रोध ग रेका छन् ।
आफ्नै बुहारीमाथि कु दृष्टि ल गाउने ससुरालाई देशव्यापी रुपमा क डा का र बा हीको माग भइरहेको छ । यद्यपि घटना निकै रहस्यमय रहेकाले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । के हो त वास्तविकता ? त्यो आउन बाँकी नै रहेको छ ।
सबिता भण्डारीको माइतीपक्षले ह त्या नै ग रे को हो भन्दै न्यायको माग गरिरहेका छन् । घटनाको प्रकृति हेर्दा आफै गरेको आत्महत्या होइन भन्दै देश तथा विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरुले चौतर्फी विरोध गर्दै आएका छन् ।
बुहारीलाई ससुराले छोरीको रुपमा हेर्नुपर्ने तर आफ्नै छोरी समान बुहारीलाई पटकपटक दु र्व्य वहार गरेपछि सहन नसकेर यस्तो भएकाे भन्ने अ ड्कल पनि धेरैले गरेका छन । सबैले आफ्नो आफ्नो धारणा राखिरहेका छन । हेर्नुहोस तलको भिडियोमा
चीनले अन्तरिक्षमा निर्माण गरेको आफ्नै नयाँ अन्तरिक्ष केन्द्रमा अन्तरिक्ष यात्रीहरु पठाउन रकेट तयार भएको जनाएको छ । यो रकेट अर्को साता अन्तरिक्षतर्फ पठाइने तयारी चीनले गरेको छ । चीनले पहिलो पटक तीन जना अन्तरिक्ष यात्रीलाई नयाँ अन्तरिक्ष केन्द्रमा पठाउँदैछ । उनीहरु तीन महिना अन्तरिक्षमा रहने छन् । उनीहरुले त्यहाँ रहँदा अन्तरिक्ष केन्द्र बाहिर हिँड्ने (स्पेसवाक), निर्माण र मर्मतका साथै वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नेछन् ।
तियान्हे नाम दिइएको नयाँ अन्तरिक्ष केन्द्रको मुख्य खण्ड गत अप्रिल २९ मा अन्तरिक्षमा पठाइएको थियो भने गत महिना अन्तरिक्ष यात्रीका लागि आवश्यक इन्धन, खाद्यान्न र उपकरण बोकेको कार्गो रकेट पठाइएको थियो ।लङ मार्च–२एफ वाई१२ रकेटलाई बुधबार चीनको उत्तरपश्चिम स्थित जिक्वान स्याटेलाइट लन्च सेन्टरमा पठाइएको छ । यो रकेटले सम्भवतः आगामी बुधबार अन्तरिक्ष यात्रीहरुलाई अन्तरिक्षमा पठाउने छ ।
चीनले पठाउन लागेका अन्तरिक्ष यात्रीहरुमा वरिष्ट अन्तरिक्ष यात्रीहरु, नयाँ व्यक्तिहरु र महिलाहरु पनि रहेका छन् । चीनले यसअघि ११ जना यात्रीलाई अन्तरिक्षमा पठाइसकेको छ जसमा सबैजसो चीनको सेनाका पाइलटहरु रहेका छन् ।हालसम्म संयुक्तराज्य अमेरिका र रुसले अन्तरिक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र बनाएका छन् । यी केन्द्रमा अमेरिका र रुस समेत अन्य देशका अन्तरिक्ष यात्रीलाई अवसर दिइए पनि चीनलाई भने सुरक्षा खतरा भन्दै संयुक्तराज्य अमेरिकाले सहभागी गराइ रहेको छैन ।
Prevप्रिय मिना : २४ वर्ष सम्म सँगै यात्रा गरेकी तिमीलाई, समयमै उपचार नपाउँदा बचाउन सकिन् , मलाई माफ गरिदिनु !
Nextखराब मौसमका कारण केहि बेरअघि सैनिक विमान दुर्घटना, थिए १४ जना सवार
नेपालमा को रोनाले देखायो शुभ सङ्केत, संक्र मित भन्दा निको हुने बढ्द
केटीलाई थाहा थिएन कि क्यामेरामा भिडियो रेकर्ड भइरहेको छ (भिडियो सहित)